ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် တီထွင်မှု ခြောက်ခု – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် တီထွင်မှု ခြောက်ခု
BBC ရဲ့ စက်တင်ဘာလထုတ် Science Focus မဂ္ဂဇင်းမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စားသုံးကားတွေက စပြီး မီးကို အသံနဲ့ ငြှိမ်းသတ်တဲ့ နည်းပညာအထိ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ တီထွင်မှု အိုင်ဒီယာ ၃၉ ခုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာမှ အလန်းဆုံး ခြောက်ခုကတော့
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်တို့ ဓာတ်ပြုခြင်းမှရတဲ့ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုရွေ့လျားတဲ့ Toyota Mirai ဟာ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ပွဲထွက်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် သီးသန့်ဟာ သိုလှောင်စရိတ် ကြီးမားလွန်းလို့ အင်္ဂလန်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သိုလှောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ အမိုးနီးယားကနေ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ကားအင်ဂျင်ထဲမှာပဲ တစ်ခါထဲခွဲထုတ် အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို တီထွင်နေကြပါတယ်။
၂. အသံအမြန်နှုန်းနဲ့ သွားမယ့် ရထားများ
Tesla Motor CEO Elon Musk ရဲ့ လေဟာပြွန်ထဲမှာ မောင်းနှင်မယ့် Hyperloop Train ပုံစံတွေဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၇၆၀ နှုန်း သွားနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ပြောရရင် ဂျပန်က နောက်ဆုံးပေါ် သံလိုက်ကျည်ဆံရထားတောင်မှ ၃၇၄ မိုင်နှုန်းပဲ သွားနိုင်တာပါ။ Hyperloop ကို နောက် ၂ နှစ်အကြာမှာ စတင် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပါလိမ့်မယ်။
၃. လူတိုင်းအတွက် အင်တာနက်
Elon Musk ဟာ ကမ္ဘာ့ပါတ်လမ်းနိမ့်ထဲကို ဂြိုဟ်တု အလုံး ၄၀၀၀ လွှတ်တင်ဖို့အတွက် အစိုးရခွင့်ပြုချက် ရယူနေပါပြီ။ အဲဒီ ဂြိုဟ်တုတွေဟာ လက်ရှိ အင်တာနက် မရသေးတဲ့ လူတွေ အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအားလုံးအတွက် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ကို အခမဲ့ သုံးစွဲစေနိုင်မှာပါ။ ၂၀၁၆ မှာ စတင်စမ်းသပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. အလိုအလျောက်မောင်း ကုန်တင်ကားများ
Mercedes Benz နဲ့ အလိုအလျောက် မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Peloton တို့ပေါင်းပြီး မကြာတော့မယ့် အချိန်မှာ မောင်းသူမဲ့ ကုန်တင်ကားတွေကို ထုတ်လုပ်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာဒရိုင်ဘာတွေဟာ အနားယူချိန် မလိုအပ်သလို ချောချောမွေ့မွေ့ မောင်းနှင်နိုင်လို့ လောင်စာဆီ စားသုံးနှုန်း ပိုနိမ့်ကျမှာ ဖြစ်ပြီး လူသား ဒရိုင်ဘာတွေထက်လဲ ပိုပြီးဈေးသက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. အသံဖြင့် မီးသတ်ခြင်း
ခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ တောမီးလောင်တာတွေ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်နေလို့ မီးကို နှိမ်နင်းနိုင်မယ့် နည်းပညာသစ်တွေကိုတီထွင်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီ အသံနဲ့ မီးသတ်တဲ့ နည်းပညာမှာတော့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆောင်းဘောက်က လာနေတဲ့ အသံ ဖိအားလှိုင်းတွေဟာ မီးတောက်ကို အောက်ဆီဂျင် ဖြတ်တောက်လိုက်မှာပါ။ ဒီတီထွင်မှုကို တောမီးလို မီးကြီးတွေမှာ မစမ်းသပ်ရသေးပေမယ့် တီထွင်သူတွေကတော့ Drone တွေနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုရင် အောင်မြင်မယ်လို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။
၆. သယ်ယူရလွယ်တဲ့ ရေသန့်စင်စက်များ
ကမ္ဘာပေါ်က လူ သန်း ၇၈၀ လောက်ဟာ ရေသန့်လုံးဝရှိပဲ နေနေရပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့ အင်္ဂလန်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သယ်ယူရလွယ်တဲ့ ရေသန့်စက်တွေကို တီထွင်နေပါတယ်။ တီထွင်မှု ပထမဆင့်မှာ ရေသန့်စက်ဟာ ၁၂ ရက်အတွင်း ရေ ၂ ကုဗမီတာ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ နည်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် လူသားတစ်ယောက် တစ်နှစ်သောက်ရေဟာ ၁ ကုဗမီတာ မကုန်ဘူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
ကမ်ဘာကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျမယျ့ တီထှငျမှု ခွောကျခု
BBC ရဲ့ စကျတငျဘာလထုတျ Science Focus မဂ်ဂဇငျးမှာ ဟိုကျဒရိုဂငျြလောငျစားသုံးကားတှကေ စပွီး မီးကို အသံနဲ့ ငွှိမျးသတျတဲ့ နညျးပညာအထိ ထူးခွားဆနျးကွယျတဲ့ တီထှငျမှု အိုငျဒီယာ ၃၉ ခုကို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအထဲမှာမှ အလနျးဆုံး ခွောကျခုကတော့
ဟိုကျဒရိုဂငျြနဲ့ အောကျဆီဂငျြတို့ ဓာတျပွုခွငျးမှရတဲ့ စှမျးအငျကို အသုံးပွုရှလြေ့ားတဲ့ Toyota Mirai ဟာ ၂၀၁၅ နှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာ ပှဲထှကျလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဟိုကျဒရိုဂငျြ သီးသနျ့ဟာ သိုလှောငျစရိတျ ကွီးမားလှနျးလို့ အင်ျဂလနျက သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော သိုလှောငျရ လှယျကူတဲ့ အမိုးနီးယားကနေ ဟိုကျဒရိုဂငျြကို ကားအငျဂငျြထဲမှာပဲ တဈခါထဲခှဲထုတျ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို တီထှငျနကွေပါတယျ။
၂. အသံအမွနျနှုနျးနဲ့ သှားမယျ့ ရထားမြား
Tesla Motor CEO Elon Musk ရဲ့ လဟောပွှနျထဲမှာ မောငျးနှငျမယျ့ Hyperloop Train ပုံစံတှဟော တဈနာရီ မိုငျ ၇၆၀ နှုနျး သှားနိုငျဖို့ ဒီဇိုငျးထုတျထားပါတယျ။ နှိုငျးယှဉျပွောရရငျ ဂပြနျက နောကျဆုံးပျေါ သံလိုကျကညျြဆံရထားတောငျမှ ၃၇၄ မိုငျနှုနျးပဲ သှားနိုငျတာပါ။ Hyperloop ကို နောကျ ၂ နှဈအကွာမှာ စတငျ စမျးသပျမောငျးနှငျပါလိမျ့မယျ။
၃. လူတိုငျးအတှကျ အငျတာနကျ
Elon Musk ဟာ ကမ်ဘာ့ပါတျလမျးနိမျ့ထဲကို ဂွိုဟျတု အလုံး ၄၀၀၀ လှတျတငျဖို့အတှကျ အစိုးရခှငျ့ပွုခကျြ ရယူနပေါပွီ။ အဲဒီ ဂွိုဟျတုတှဟော လကျရှိ အငျတာနကျ မရသေးတဲ့ လူတှေ အပါအဝငျ ကမ်ဘာပျေါက လူသားအားလုံးအတှကျ မွနျနှုနျးမွငျ့ အငျတာနကျကို အခမဲ့ သုံးစှဲစနေိုငျမှာပါ။ ၂၀၁၆ မှာ စတငျစမျးသပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄. အလိုအလြောကျမောငျး ကုနျတငျကားမြား
Mercedes Benz နဲ့ အလိုအလြောကျ မောငျးနှငျမှု နညျးပညာ ကုမ်ပဏီ Peloton တို့ပေါငျးပွီး မကွာတော့မယျ့ အခြိနျမှာ မောငျးသူမဲ့ ကုနျတငျကားတှကေို ထုတျလုပျသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ကှနျပွူတာဒရိုငျဘာတှဟော အနားယူခြိနျ မလိုအပျသလို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ မောငျးနှငျနိုငျလို့ လောငျစာဆီ စားသုံးနှုနျး ပိုနိမျ့ကမြှာ ဖွဈပွီး လူသား ဒရိုငျဘာတှထေကျလဲ ပိုပွီးဈေးသကျသာမှာ ဖွဈပါတယျ။
၅. အသံဖွငျ့ မီးသတျခွငျး
ခုနှဈပိုငျးတှမှော တောမီးလောငျတာတှေ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှာ ဖွဈပျေါနလေို့ မီးကို နှိမျနငျးနိုငျမယျ့ နညျးပညာသဈတှကေိုတီထှငျလကျြ ရှိပါတယျ။ ဒီ အသံနဲ့ မီးသတျတဲ့ နညျးပညာမှာတော့ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ဆောငျးဘောကျက လာနတေဲ့ အသံ ဖိအားလှိုငျးတှဟော မီးတောကျကို အောကျဆီဂငျြ ဖွတျတောကျလိုကျမှာပါ။ ဒီတီထှငျမှုကို တောမီးလို မီးကွီးတှမှော မစမျးသပျရသေးပမေယျ့ တီထှငျသူတှကေတော့ Drone တှနေဲ့ တှဲဖကျ အသုံးပွုရငျ အောငျမွငျမယျလို့ စိတျအားထကျသနျနကွေပါတယျ။
၆. သယျယူရလှယျတဲ့ ရသေနျ့စငျစကျမြား
ကမ်ဘာပျေါက လူ သနျး ၇၈၀ လောကျဟာ ရသေနျ့လုံးဝရှိပဲ နနေရေပါတယျ။ ဒီအခကျအခဲကို ဖွရှေငျးဖို့ အင်ျဂလနျက သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ သယျယူရလှယျတဲ့ ရသေနျ့စကျတှကေို တီထှငျနပေါတယျ။ တီထှငျမှု ပထမဆငျ့မှာ ရသေနျ့စကျဟာ ၁၂ ရကျအတှငျး ရေ ၂ ကုဗမီတာ သနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီပမာဏဟာ နညျးတယျလို့ထငျရပမေယျ့ လူသားတဈယောကျ တဈနှဈသောကျရဟော ၁ ကုဗမီတာ မကုနျဘူးဆိုတာ သိထားသငျ့ပါတယျ။
Previous: ဆရာ ပီမိုးနင်း ရဲ့ မိန်းမစိတ်ကျမ်း စာအုပ်
Next: သင့်ကြွက်သားတွေ အများဆုံး ဘယ်လောက်ထိ ကြီးထွားနိုင်သလဲ??